Waan Isaayyaas itti jiruu cal’ifnee hin ilaallu! – Kichuu
HomeNewsAfricaWaan Isaayyaas itti jiruu cal’ifnee hin ilaallu!
Waan Isaayyaas itti jiruu cal’ifnee hin ilaallu
By Kumkummee Sirbaa
Bilxiginnaan Isaayaas daboo kadhattee humni tika addaa fi waraanni Shaa’ibiyaa Oromiyaa seenee jira. Kana cal’ifnee ilaaluu hin qabnu.
Isaayaas takkaa kaayyoo Oromootti amanee nu gargaaree hin beeku. Bara 1998 keessa osoo lolli Badimmee hin jalqabin hogganooti ABO seeratti dhihaachuu qaban jedhee VOA irratti dubbatee ture. Sana obsinee dhiifne.
Gargaarsi Shaa’ibiyaan QBO tiif godhaa ture ‘diinnii diina kootii fira kooti’ kan jedhu irra ture. Bara Dargii mootummaa Dargii kuffisuuf humna socho’u kamin iyyuu gargaaraa turan. Gargaarsi isaanii Dargii kuffisuuf malee kaayyoo ABOtti amananii ykn fudhatanii hin turre. Kana nutis beekna isaaniis tolchanii beeku.
Kan nama dhibu garuu yeroo dhaaboti Ethiopia hundi qabsoo bilisummaa ummata Eritrea balaaleffataa turan ABO fi ummatni Oromoo mamii tokko malee deggeran. ABO gaafa bu’ureeffame irraa eegalee gaaffii Eritrea akka deggeru ibsate. Maal godha ree namni dhadhaa afaan kaa’ee dhagaa afaan nama kaa’a’ jedhama mitii?
Gaafa Dargiin kufe ammoo Wayyaaneen akka referandamii isaanii mallatteesituuf jecha bira dhaabbatanii nu lolan. Waraanni isaani bara Chartaraa tripartite committee jedhamuun Ethiopia keessa ture ifaa ifatti Wayyaaneef tumse. Nan yaadadha bara 1992 keessa waraana mooraa qubate ilaaluuf garee warra Shaa’ibiyaa fi Wayyaanee wajjin Begii deemnee turre. Walgahii godhanne irratti namtichi Eritrea Shaalaqaa jedhamu tokko, humna keessan hundaa mooraa hin galchine jedhee nu lolaa ture. Kan nama dhibu bara 2000 keessa Eritrea deemnee namticha kana argeen ture. Saalfii irraa kan ka’e ija keessa na ilaaluu hin dandeenye.
Bara 1997 ammoo duula WBO Oromiyaa keessaa baasuu godhame irratti waraanni Shaa’ibiyaa qooda fudhateera. Warra duula sana irraa qooda fudhatan waggaa tokko booda bara 1998 wal arginee nutti himanii turan. Duula sanaan WBOn hangi tokko dhiibamee Oromiyaa keessaa bahee yeroo xiqqoo booda lolli Baadimmee jalqabe. Warri Shaa’ibiyaa kun dogoggora amma dura hojjatan irraa illee hin baranne. Har’as kunoo humna waraanaa fi tikaa fidanii Nafxanyaa-Bilxiginnaaf tumsaa jiru. WBO loluuf dhihaa fi kibba Oromiyaatti bobbaasaani jiru. Dr. Bilxiginnaas kan eegu humna Shaa’ibiyaa ti.
Oromoon galata kan wallaalu miti. Tooftaafis haa tahu yeroo rakkoo keenyaa dhaaba ABO gargaaruu isaaniif galatoomaa jenna.
Shaa’ibiyaan daboo dhufee Bilxiginnaa gargaaree dhiisee qabsoo kee waan of duuba deebisu hin qabu. Firri qabsoo ati qabdu suma ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo malee gara biraa hin jiru. Eritrean biyya ollaa ti dhimma keenya keessa hin seenu jennus kunoo isa bara 1997 irra deebi’uun har’as nu loluuf Oromiyaa seenanii jiru. Shaa’ibiyaan nu loluuf waraanaa fi tika isaa erguus waan ajaaji’ibaa tokko fidu hin danda’u. Yaa Oromoo! lammilee Eritreaa Oromiyaa keessa jiraniin maaliif nu loltu jedhii gaafadhu. Warri biyya alaa jirru ammoo komunitii fi embassii Eritreatti barreessuun maaliif nu loltu jennee gaafachuu dha. Dhiiga dhangala’u hanqisuuf malee kan dhuma irratti injifatu Oromoo isa haqaaf lolu waan taheef humna kee jabeeffattee qabsoo kee finiinsuu dha. Shaa’ibiyaa fi gareen inni tumsuuf dhufe qaana’anii akka Oromiyaa keessa bahan shakkin hin jiru.
Mootummaa Shaa’ibiyaa tiif
Mootummaa Shaa’ibiyaa ‘mind your own business’. Dhimma keenya keessa seentettaa dafii keessa bahi. Hariiroo akka biyyoota ollaatti gidduu keenya jiraachuu qabu waan booressu irraa of qusadhu. Humni har’a ati gargaaraa jirtu bor akka aangoo jabeeffateen Assab keenya jedhee lola akka sirratti banu shakkin hin jiru. Nafxanyaan haga har’aatti biyya Eritrea jedhamtuuf beekumtii kennitee hin beektu. Waan bor si liqimsuu barbaadu jabeessaa jirtaa of eeggadhu. Gorsa yo didde du’a hin diddu jedhama.
Ummata Eritrea tiif
Ummatni Oromoo fi ummatooti Eritrea: Tigirinyaa, Tigree, Affar, Saho, Bileen, Kunaamaa, fi kkf hundi obboleewwan malee diina miti. Oromoon akka firaatti isin ilaala. Mootummaan keessan garuu nu gidduutti waan diinummaa uumu dalagaa jira. Qabsoo gootanii biyya walaboomsitanii, bilisummaa dhabdanii hacuccaa abbaa irree jala jiraachuu keessanitti ni gaddina. Isin iyyuu qabsoo cimaatu isin eeggata. Kanaaf firummaa keenya cimsachuun irra bu’aa isiniifis nufis qaba. Kanaaf gochaa mootummaa maqaa keessaniin daldalu balaaleffadhaa, irraa fagaadhaa.
Waraana Shaa’ibiyaa Oromiyaa keessa jiruu tiif
Maaliif akka Oromoo loltan mataa keessan gaafadhaa. Lolli isin lolaa jirtan kun bu’aa eenyuutiif jedhaa. Dhiigni keessan Oromiyaa keessatti dhangala’uu hin qabu. Kanaaf biyya keenya keessa dafaa bahaa. Lolli isin akka loltan godhamaa jiru kun kan seenaa keessatti isin gaafachiisuu dha. Bilxiginaaf mercenary taataani loluu irraa of qusadhaa. Dafaa biyya keessanitti galaa.
Lammiilee Eritrea Oromiyaa keessa jirtaniif
Lammiileen Eritrea Oromiyaa keessa jiraattan hedduu dha. Kan isin daldalataa fi horataa jirtan biyya Oromoo irratti akka tahee beektu. Nagaan dhaan nagadattanii, oomishatanii gurgurrachuu ni dandeessu. Oromoon mirga ambaa kabajuu fi eeguu irratti hiriyaa hin qabu. Garuu mootummaa keessan kan amma Oromoo lolaa jiru cinaa ni dhaabbattu taanaan waan isin irra gahuu danda’uuf gaafatamni mataa keessan. Oromiyaa keessa jiraattanii shuqulachuu barbaadduu yoo tahee gochaa farra ummata Oromoo irraa of qusadha. Kun gorsa firummaa, kan akka Oromootti isinii kenninuu dha.
Qabsoon Bilisummaa haga galii isaa gahutti itti fufa
Qeerroo Machaaraa Miicata
BB$: ODUU OOLMAA OROMIYAA (HGY 17/2020)
Marii Haala Jawar Keessa jiru ilaalchisee (Hag 17, 2020)
Dhukkubsachuu Jawaar Mohaammed fi Labsii Qeerroo
Qorannoon duraa Jawaar Mohaammad fa’i yeroo sadaffaaf guyyaa biraatti darbe